पहिलोपटक पाइपलाइनबाट इन्धन आएपछि आजै बाट बजारमा डिजेल र पेट्रोलको भाउ पनि ह्वातै घट्यो ! – Life Nepali
प्रकाश सिलवाल र अशोक घिमिरे – पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याइन थालेपछि ढुवानी खर्च कम भई नेपाली बजारमा उपभोक्ताले राहत पाउन थालेका छन् । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल आयाल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरी आज मध्याह्न १२ बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल÷मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु दुई÷दुई घटाएपछि उपभोक्तालाई राहत भएको हो । मूल्य घटेसँगै प्रतिलिटर डिजेल÷मट्टितेल रु ९५ र पेट्रोल रु १०७ कायम भएको छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य रु १०९ र डिजेल÷ मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु ९७ थियो । पाइपलाइनका कारण ढुवानी खर्च जोगिने भएपछि स्वचालित प्रणालीमा भाउ बढेमा कम प्रतिशतमा वृद्धि हुनेछ ।
पाइपलाइनाबाट इन्धन भित्र्याउन थालेपछि वार्षिक रु दुई अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च बचत हुनेछ । मुलुकले समृद्धि र आर्थिक विकासको लक्ष्य लिइरहेको बेला यस राष्ट्रिय आयोजनाले प्रत्यक्ष योगदान दिने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रिमोट थिचेर इन्धन ‘सेन्डिङ’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ‘रिसिभिङ’ गरेपछि आज परियोजनाको शुभारम्भ भएको थियो । यसअघि भारतको रक्सौल नाकाबाट दैनिक १५० भन्दा बढी गाडीमा पेट्रोल र डिजेल आउने गरेकामा त्यसको ढुवानी खर्च पूरै बचत हुनेछ । पाइपलाइनका लागि अतिरिक्त कर्मचारी र बिजुली खर्च लाग्ने छैन ।
यसरी नयाँ प्रविधिबाट तेल आउँदा प्रतिलिटर ६० पैसासम्म कम पर्न आउने अनुमान गरिएको छ । परियोजना शुरु भएपछि वार्षिक करीब रु दुई अर्ब बचत हुने निगमको अनुमान छ । हाल भारतबाट छ हजार किलोलिटर डिजेल र एक हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात हुँदै आएको छ । यस परियोजनाले मासिक रु एक अर्ब २९ करोड घाटामा रहेको निगमलाई पनि घाटापूर्तिमा सघाउनेछ । नेपालमा पेट्रोलभन्दा डिजेलको माग बढी भएकाले हालका लागि यसबाट डिजेल ल्याइनेछ । आवश्यकताअनुसार चौबीसै घण्टा चल्ने यो पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा २०० किलोलिटर तेल झर्ने क्षमता छ । नेपाल आयल निगमका अमलेखगञ्ज डिपो (क्षेत्रीय कार्यालय)का प्रमुख प्रदीप यादवका अनुसार परियोजनाको ‘पाइपिङ’ प्रणालीअन्तर्गत मेकानिकल र सिभिलकार्य गत महीना सकिए पनि शुभारम्भको मिति आज जुरेकाले डिजेल ल्याउन शुरु गरिएको हो ।
दक्षिण एशियामै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन – नेपालतर्फ ३६ दशमलव २ र भारततर्फ ३३ किलोमिटर गरी कूल ६९ दशमलव २ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भई यसअघि परीक्षणका रुपमा पाइपबाट डिजेल ल्याइसकिएको छ । यो दक्षिण एशियामै पहिलो अन्तरदेशीय (क्रस बोर्डर) पाइपलाइन परियोजना हो ।पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल ल्याउन थालेपछि यसको प्रविधिबाट सम्पूर्ण सूचना (विवरण) नियन्त्रण कक्षमा जानकारी हुने प्रणाली विकास गरिएको छ । कति आएको, चुहिएको, रोकिएको वा कुनै अवरोध भएमा त्यसको सूचना कम्प्युटर प्रणालीमा जानकारी हुनेछ ।
पाइपलाइनलाई प्रथम चरणमा अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म जोड्न ‘फाष्टट्र्याक’को आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन भइरहेकको निगमले जनाएको छ । पाइपलाइन निर्माण, डिपो निर्माण तथा जग्गा खरीद आदि कार्यलाई छुट्टै परियोजनाको रुपमा संरचना, कार्यविधि आदि बनाई व्यवस्थित तबरबाट अघि बढाइन पनि तयारी भएको छ ।एलपी ग्यास तथा प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा चीनको केरुङदेखि त्रिशूली वा धादिङसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइने निगमले जनाएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत अमलेखगञ्ज डिपोमा रहेका चार वटा भण्डारण ट्याङ्कीलाई रेक्टोफिटिङ गरिएको छ । यसमा दुई वटा चार हजार १०० किलोलिटर र दुई वटा तीन हजार ९०० किलोलिटर भण्डारण क्षमताका छन् । भण्डारणस्थलमा आगलागी नियन्त्रणका लागि ठूलाठूला पानीका पाइप बिछ्याइएकोे छ । ‘टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इन्स्ट्रमेन्टेसन’, ‘केवुलिङ’ पनि गरिएको छ । सोही स्थानमा २४ वटा ‘लोडिङ बे’ प्रयोगशाला बन्ने प्रक्रियामा छ । यस प्रकारको परियोजना नेपालमै पहिलो भएको र प्रज्वलनशील तथा संवेदनशील विषय भएकाले सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा निगम गम्भीरताका साथ लागिरहेको छ । गाडीबाट ढुवानीको तुलनामा भने पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँदा सैयौँ गुणा सुरक्षित हुने निगमको भनाइ छ ।
Previous नेपाली युवा इन्जिनियरले बनाए पानीले चल्छ गाडी ! (हेर्नुहोस् भिडियाे)
Next सत्यमोहन जोशीको तस्वीरअंकित सिक्का जारी